Mega for Android waxay ku siineysaa 50GB oo ah kaydinta daruurta bilaashka ah. Androidsis
Ku hel 50GB meel bannaan oo lagu kaydiyo daruur bilaash ah 'Mega'
Maanta waxaan rabaa inaan ku baro mid kale oo ka mid ah codsiyadaas oo aanan seegi karin qalabkayaga Android. Codsi kordhin doona booska kaydinta ee terminaalkeena Android, oo ah tiro aan laga fiirsan karin 50GB oo ah kaydinta daruurta bilaashka ah.
Codsiga waxaa la yidhaa Mega waana sagaaladda ama sii socoshada websaydhka soo degsashada ee aan fiicnayn ee megaupload.
Maxay noo fidisaa Mega?
Mega Marka hore, waa codsi gebi ahaanba bilaash ah oo aan si toos ah uga soo dejisan karno Play Store de Android. Hawlaha baaxadda leh ee ay leedahay waxaa ka mid ah qaddarka aan la tixgelin karin ee gebi ahaanba kaydinta bilaashka ah ee ay na siinayaan, iyadoo 50GB boos ee daruuraha la heli karo iyada oo aan wax shuruud ah iyo weligiisba.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay si loo muujiyo waxaan tirin karnaa xulashooyinka soo socda:
Loo heli karo Android iyo qaabka Webka si loo xakameeyo koontadayada biraawsar internet kasta.
Si toos ah uga soo dejiso oo uga soo degso mobilka
Iswaafajinta otomaatiga ah ee kamaradda si loogu soo dhejiyo dhammaan sawiradeena iyo fiidiyowyadeena Mega.
Ka raadi faylasha Mega.
La wadaag xiriiriyeyaasha 'Mega links' cidda aad rabto.
Tirtir oo magacaabi faylasha.
Ku wareeji faylasha faylalka kale ee Mega.
Mid ka mid ah waxyaalihii aan aadka u jeclaa Mega, isbarbar dhigida codsiyada kale ee qaabka sida DropBox, xitaa waxay ku jirtaa koonto loo tixgeliyey mid bilaash ah, the xawaaraha soo dejinta iyo soo dejinta inay noo fidiyaan waxayaabaha aan ka kooban nahay oo dhan.
Muuqaal kale oo ay tahay in la xuso ayaa ah Mega Haa, waxay na siineysaa ikhtiyaarka ah inaan awoodno inaan si toos ah uga daawanno qalabka a Streaming dhammaan waxyaabahayaga, sidaa darteed way ku habboon tahay in la daawado fiidiyowyadeena iyo sawirradeenna iyada oo aan la soo degsan faylka su'aasha laga qabo.
Marka la eego dejintooda, runtii waan jeclaaday ikhtiyaarka ay ku dhex jirto soo dejinta kamaradda kaas oo aan ka duwanaan karno soo dejinta kaliya markaan ku xirnahay shabakad Wifi iyo isaga xeedho kuxiran. Sidan ayaan uga faa'iideysan karnaa habeenka, oo inta badan aan lacag ka qaadno aaladahayaga, si aan ugu dhejinno sawirradeena iyo fiidiyowyadeenna la qaaday maalintii oo dhan.
Codsi aad loogu taliyay, oo aan shaqsiyan kugu dhiirigaliyo inaad tijaabiso, waana taas 50GB kaydinta bilaash ah Ma aha xab-xabbo ee turkey, maahan?
Macluumaad dheeraad ah - Soo dejiso nooc cusub oo Khariidadaha ah & Muuqaalka Wadada APK
Soo dejiso - Nuqulka Webka
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Ku hel 50GB meel bannaan oo lagu kaydiyo daruur bilaash ah 'Mega'
Joss 7088 dijo
Ma jiraan wax kale oo ka maqan codsiga daaqadaha, taas oo u oggolaanaysa inay u ekaato sida darawal adag iyo sanduuqa macsalaameynta: p
mmm… Mega waxay bixisaa 50GB laga bilaabo maalinta ugu horeysa dhamaan isticmaaleyaasha isdiiwaangeliyey… uma baahnid barnaamijka APP ee Android for
Ku jawaab ruvelro
Ma jiraa qof si kale u yiri? Halkan waxaan kaliya ku soo bandhigeynaa barnaamijka Android oo waxaan ku tusineynaa inaan haysanno 50Gb oo keyd ah oo bilaash ah, ma dhaheyno wax u gaar ah Android ama wax la mid ah
Apex Launcher 2.2 Beta wuxuu dhaqaajiyaa hufnaanta bar-tilmaameedka iyo ogeysiisyada
Cusboonaysiin cusub oo ah turjubaanka rasmiga ah ee Google, Google Translate (Download APK)